သင်၏ကိုယ်ပိုင်လူမှုကွန်ယက်ကို GROU.PS ဖြင့်တည်ထောင်ပါ
စနေနေ့, ဇူလိုင်လ 28, 2012 တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 4, 2015 Douglas Karr
UPDATE: ပုံပေါ်ပါတယ် ပြissuesနာများ၏သိသာထင်ရှားသောအစီရင်ခံစာများ GROU.PS. အတွက်အစီရင်ခံတင်ပြခဲ့ကြသည် ကျွန်ုပ်၏စာဖတ်သူတစ် ဦး အားကျွန်ုပ်၏အာရုံကိုယူဆောင်လာသည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်နယ်ပယ်ကိုဖောက်သည်များသို့မဟုတ်သတ်သတ်မှတ်မှတ်အသိုင်းအဝိုင်းတစ်ခုအတွက်စတင်ရန်ရှာဖွေနေသည်ဆိုလျှင်သင်၏ရွေးချယ်မှုများသည်ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများအတွက်ငွေများစွာသုံးခြင်းသို့မဟုတ်သင်စျေးကွက်တွင်ရောက်ရှိနေသောလူမှုကွန်ယက်ပေါင်းများစွာကိုအသုံးချနိုင်သည်။ Lovd By Less or open source လူမှုရေးကွန်ယက်ပလက်ဖောင်းကိုသင် download လုပ်၍ တပ်ဆင်နိုင်သည် ကြက်ဥ, သို့မဟုတ်သင်ကဲ့သို့သော hosted ဖြေရှင်းချက်များကိုသုံးနိုင်သည် Ning, Spruz, လူမှုရေး GO or GROU.PS.
GROU.PS ၎င်းသည်လူများအားအတူတကွ စုပေါင်း၍ အကျိုးစီးပွားသို့မဟုတ်ဆက်နွယ်မှုတစ်ခုအကြားအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်သောလူမှုအသိုင်းအ ၀ န်းများဖွဲ့စည်းရန်ခွင့်ပြုသည့်လူမှုရေးအုပ်စုတစ်ခုဖြစ်သည်။ မည်သည့်အွန်လိုင်းအုပ်စု၏မဆိုလုပ်ဆောင်နိုင်မှုကိုအဖွဲ့ဝင်များစုပေါင်းထားသောစိတ်ကူးစိတ်သန်းများနှင့်သာကန့်သတ်ထားသည်။ GROU.PS ပလက်ဖောင်းသည်အွန်လိုင်းဂိမ်းဖိုရမ်များ၊ e-learning စာသင်ခန်းများ၊ ပရိတ်သတ်ကလပ်များ၊ ပရဟိတရန်ပုံငွေရှာဖွေရေးလှုပ်ရှားမှုများ၊ ကောလိပ်ကျောင်းသားဟောင်းများအသင်းများနှင့်အဖြစ်အပျက်များကိုစီစဉ်ခြင်းဆိပ်ကမ်းများအပါအ ၀ င်အသိုင်းအဝိုင်းအမျိုးမျိုးကိုဖန်တီးရန်အသုံးပြုသည်။
GROU.PS သူတို့စုံတွဲတစ်တွဲလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းသတင်းစာအတော်လေးနည်းနည်းတယ် Ning တင်သွင်းသူကိုတည်ဆောက်ခဲ့သည်။ Ning သည်လခပေးသောမော်ဒယ်သို့ပြောင်းရွှေ့သွားသည်။ ထို့ကြောင့် GROU.PS သည်သင်၏ Ning ဥပမာမှသင်၏ဥပမာဥပမာ မှနေ၍ GROU.PS ကွန်ယက်သို့လှုပ်ရှားမှုနှင့်အရာဝတ္ထုအားလုံးကိုတင်သွင်းရန်ရိုးရှင်းသောလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုကိုတီထွင်ခဲ့သည်။ GROU.PS တွင်စွမ်းရည်ပြည့် ၀ သောအင်္ဂါရပ်ရှိသည်။
လက်ငင်း Setup - အသုံးပြုရန်အလွန်လွယ်ကူပြီးသင်သည် ၅ မိနစ်အတွင်းတွင်အလုပ်မလုပ်ပါ။ ထို့နောက်လူများအားသင်၏ရပ်ကွက်သစ်သို့ ၀ င်ရန်ဖိတ်ကြားနိုင်သည်။
70+ တင်းပလိတ်များ - လူတိုင်းအတွက်ပုံစံရှိတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့၏အသွင်အပြင်ကိုအသုံးပြုရလွယ်ကူသောမျက်နှာပြင်ဖြင့်စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ပါ။ ဒါမှမဟုတ် CSS နဲ့ backend ကိုအပြည့်အဝလေ့လာနိုင်တယ်။
15+ အက်ပလီကေးရှင်းများ - စနစ်သည် plug and play ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အက်ပ်များတွင်ဖိုရမ်များ၊ ဘလော့များ၊ ဝီကီ၊ ဓါတ်ပုံများ၊ ဗီဒီယိုများ၊ ရန်ပုံငွေများနှင့်အခြားအရာများပါဝင်သည်။ သင်လိုအပ်သည့်အနည်းငယ်သို့မဟုတ်အားလုံးအားသုံးပါ။ သင့်အပေါ်မူတည်ပါတယ်။
ဘက်ပေါင်းစုံ - အများဆိုင်အုပ်စုများသည်အမြင့်ဆုံးထိတွေ့မှုနှင့်အသွားအလာကိုရရှိရန်၎င်းတို့ရွေးချယ်ထားသောပို့စ်များနှင့်လှုပ်ရှားမှုများကိုတွစ်တာနှင့်ဖေ့စ်ဘုတ်သို့တိုက်ရိုက်ထုတ်ဝေနိုင်သည်။
အများပြည်သူသို့မဟုတ်ပုဂ္ဂလိက - သင်တစ်ကမ္ဘာလုံးကိုမြင်စေပြီးသင်၏အဖွဲ့ကိုအထောက်အကူပြုနိုင်သည်၊ သို့မဟုတ်ရွေးချယ်ထားသောလူနည်းစုဝင်ခွင့်ကိုကန့်သတ်နိုင်သည်။ သင်တို့အတွက်အလုပ်လုပ်သော privacy blend ကိုဖန်တီးပါ။
moderation - ပါဝင်မှုကိုဘယ်သူဖန်တီးနိုင်တယ်၊ ဖန်တီးနိုင်တယ်၊ တည်းဖြတ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုသင်ဆုံးဖြတ်တယ်။ သင်၏အဖွဲ့ဝင်များအတွက်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ခွင့်ပြုချက်အဆင့်ကိုသတ်မှတ်ပါ။
ငွေရှာခြင်း - Prestige သည်သင်၏အဖွဲ့သို့ယူဆောင်လာသည့်တစ်ခုတည်းသောဆုမဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကိရိယာများကို အသုံးပြု၍ ၀ င်ငွေကိုရရှိနိုင်သည်၊ သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့၏ထည့်သွင်းထားသောရန်ပုံငွေအက်ပ်ကို အသုံးပြု၍ အကြောင်းပြချက်အတွက်ငွေရှာနိုင်သည်။ လက်မှတ်တွေရောင်း၊ လစာပေးတဲ့အသင်းဝင်အစီအစဉ်တွေစသည်။
API ကို - သင့်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့တည်ဆောက်ထားပြီးဖြစ်သောကိရိယာများကိုသာသင်ကန့်သတ်ထားသည်မဟုတ်ပါ။ Third party tool များကို သုံး၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ APIs များကို သုံး၍ သင့်အဖွဲ့၏ထူးခြားသောလိုအပ်ချက်များနှင့်အညီသင့်ကိုယ်ပိုင်စိတ်ကြိုက်လုပ်ဆောင်နိုင်မှုကိုထည့်နိုင်သည်။
Fanatic ပံ့ပိုးမှု - သင်လမ်းတစ်လျှောက်တွင်မည်သည့်အကူအညီမဆိုလိုအပ်ပါကအချိန်မရွေးကျွန်ုပ်တို့ထံဆက်သွယ်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏အောင်မြင်မှုကိုရည်မှန်းပြီးကျွန်ုပ်တို့စိတ်ကျေနပ်မှုရရှိစေရန်အချိန်ယူရလိမ့်မည်။
အစီအစဉ်များသည်တစ်လလျှင်ဒေါ်လာ ၂.၉၅ မှကန်ဒေါ်လာ ၂၉.၉၅ အထိရှိသည်။
30:2012 pm တွင်ဇူလိုင်လ 10, 19
ရှိပြီးသားကွန်ယက်များပြင်ပတွင်သီးခြားလူမှုကွန်ယက်တစ်ခုတည်ဆောက်ခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကဘာလဲ။ ငါ LinkedIn အဖွဲ့များ (သို့) Facebook Groups များစွာမှာပူးပေါင်းခဲ့တယ်၊
31:2012 pm တွင်ဇူလိုင်လ 1, 24
မင်္ဂလာပါ @andrewkkirk: disqus! ထိုတည်ရှိနေသောကွန်ယက်အများစုသည်သင့်အသိုင်းအဝိုင်းကိုသူတို့ပေးနိုင်သည့်ရွေးချယ်မှုများ၌အကန့်အသတ်ဖြင့်သာရှိသည်။ သတိရပါ၊ သူတို့၏အာရုံသည်သင့်အသိုင်းအဝိုင်းအတွက်မဟုတ်ဘဲသူတို့၏ကိုယ်ပိုင်ဝင်ငွေကိုသာဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်သင့်တွင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအသိုင်းအဝိုင်းတစ်ခုရှိပါက၊ သင့်တွင်ကုဒ်များသိုလှောင်ခန်း၊ ဗီဒီယိုစာကြည့်တိုက်နှင့်ဤအုပ်စုများတွင်သင်အလွယ်တကူမရရှိနိုင်သည့်အခြားပေါင်းထည့်မှုများရှိနိုင်သည်။ စီးပွားရေးအပြင်ဘက်မှာငါအသိုင်းအဝိုင်းတစ်ခုလုပ်ခဲ့တယ် http://www.navyvets.com ပြီးတော့ဒီပလက်ဖောင်းကအကြောင်းအရာတွေကို 'ပိုင်ဆိုင်' ခွင့်၊ ကြော်ငြာဒေါ်လာရအောင်လုပ်ပေးတယ်၊ အခုငါတို့ကအမြတ်အစွန်းမရတဲ့ပြောင်းလဲမှုဖြစ်လာတယ်။ ငါ linkIn အုပ်စုတစ်စုနှင့်အတူပြီးမြောက်နိုင်ဘူး!
31:2012 pm တွင်ဇူလိုင်လ 11, 49
@douglaskarr: ဂရိတ်တုံ့ပြန်မှု disqus အစကန ဦး မတွေ့မြင်ခဲ့ဖူးသောအလွန်ကောင်းသောအတွေးအခေါ်များစွာရှိသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
1:2013 pm တွင်စက်တင်ဘာ 11, 00 မှာ
ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုနှင့်ငွေတောင်းခံသည့်ပြproblemsနာများနှင့်စပ်လျဉ်း။ ဤကုမ္ပဏီနှင့်ပေါင်းသင်းပါ။ သူတို့ရဲ့ custors ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်ရန်အတွက်ဖုန်းနံပါတ်မရှိပါ။ ဒီ link ကိုသူ့ဟာသူဘို့ပြောပါစေ။ Ripoff အစီရင်ခံစာ http://www.ripoffreport.com/reports/search/grou.ps
1:2013 pm တွင်စက်တင်ဘာ 11, 04 မှာ
wow - သတင်းအချက်အလက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
1:2013 pm တွင်စက်တင်ဘာ 11, 23 မှာ
ပို့စ်တင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် သင် twitter ပေါ်တွင် RT ကို ၀ မ်းသာပါလိမ့်မည်။